Parks နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(2/12)
Here we will look at the many great features of Japanese parks, including parks that dot the city as urban oases, parks that boast gorgeous fields of flowers, forest parks, and parks built on castle ruins. Depending on the time of year, these parks may also host festivals.
နီအိဂတ၊ တိုးယာမ၊ နာဂါနို၊ ဂိဖု ခရိုင်လေးခုကို ခွက်ရက်ရှိတဲ့ ချူးဘုစမ်းဂခုခိုခုရိစွတ်ပန်းခြံထဲမှာ ရှိပြီး ဟခုဘစမ်းတောင်ကို အဓိကထားပြီး တော...
တိုကျိုမြို့မှ ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိပြီး ရှောဝခိနန်းပန်းခြံက ပေါကြွယ်ဝတဲ့စိမ်းလန်းမှုတွေနဲ့ ကျယ်ပြန့် တဲ့နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ လှေစီးခြ...
၁၉၀၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး သမိုင်းကြောင်းအရှည်ကြီးရှိတဲ့ ပန်းခြံပါ။ အနိမ့်အမြင့်များတဲ့ ပန်းခြံအတွင်းမှာ ခဲအိတခုပန်းခြံနဲ့ ချအူစုတေ...
အာဇုရှိမမြို့ရဲ့ သံလွင်သီးကို အကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ပန်းခြံဖြစ်တယ်။ ပန်းခြံအတွင်းမှာ သံလွင်သီးပင်များစွာ ဝန်းရံတည်ရှိပြီး ဂရိစတိုင်အဆော...